Yakanakisa tadalafil powder-china Mugadziri mutengesi fekitori
CMOAPI ine huwandu hwakazara hwezvigadzirwa zveTadalafil, uye ine huwandu hwese hwehutongi hwehurongwa.
Chii chinonzi Tadalafil (Cialis Powder)?
Tadalafil, inonziwo Cialis powder) inova phosphodiesterase-5 enzyme (PDE-5) inhibitor uye zvichireva kuti inovhara PDE-5. Izvi zvinozorodza mimwe mhasuru uye tsinga dzeropa, izvo zvinowedzera kuyerera kweropa kuenda kunhengo yekubereka kuti ibatsire nekumira. Cialis powder (tadalafil) inobatawo kuwedzera zviratidzo zveprostate.
Rect Erectile kusagadzikana (ED)
♦ Yakawedzera prostate (BPH)
Bt nzira, Cialis imushonga waunogona kungoiona muchitoro chezvinodhaka, ine chinhu chinoshanda tadalafil powder. Inowanikwa semapiritsi (2.5, 5, 10 uye 20 mg), macapsule anowanikwawo. Tadalafil 5mg ndiyo yakanyanya kuenzana muyero wevanhu vazhinji.
Tadalafil Inoshanda Sei / Inotamba Kubudirira?
Tadalafil inoonekwa seimwe yeiyo PDE5 (phosphodiesterase mhando 5) inhibitors. Panguva iyo aya mapoka emakomputa anotadzisa PDE5 ipapo ivo vanovandudza erectile basa. Panguva yekumutswa pabonde, kumiswa kunoitika pamberi pekuyerera kweropa kwakakwana mumatumbu epenile, uye zvinoguma mutsinga dzakasununguka. Iyi mhinduro inogadziriswa kuburikidza NO (nitric oxide) kugadzirwa mumaseru terminals uye endothelial maseru.
Kubudiswa kwe nitric oxide kunowedzera musanganiswa we cyclic guanosine monophosphate, inowanzozivikanwa se cGMP kana cyclic GMP. Iyo cGMP inobatsira mukuzorodza muswe wakatsetseka, uye zvakare inowedzera kuyerera kweropa kune iyo corpus cavernosum. Chinhu chinoshamisa Cialis inodzvinyirira PDE5 nekuwedzera huwandu hwecyclic GMP. Izvi zvakakosha kuti uzive kuti munhu anofanirwa kusangana nekukurudzirwa pabonde kwekutanga kuburitswa kweNO. Izvi zvakakosha sezvo mhedzisiro yechikamu ichi isingaitike mukusavapo kwekusimudzira bonde.
Cialis powder (Tadalafil) inokwanisa kudzikisira zviratidzo zvekuwedzera kweprostate gland iyo inosanganisira kugara uchikurumidza kuita weti, kusagadzikana kweweti, uye matambudziko mukutarisa. Mushonga uyu unoita izvi sezvo uchizorodza mhasuru dziripo mudundira neprostate. Panyaya yeplmonary hypertension, Cialis inobatsira mukuzorodza tsinga dzeropa dziri muchipfuva uye izvi, zvakare, zvinobatsira mukuwedzera kuwedzerwa kweropa kumapapu. Izvo zvinoderedzawo vashandisi 'moyo' basa rekuremedza.
Nzira Yekutora Tadalafil Powder?
Ini ndinotenda kuti vanhu vese vanozobvunza iwo iwo mubvunzo pavanotenga tadalafil, zvaitoda isu kuti tizvizive uye tizive kutora tadalafil powder, izvo zvatinofanira kuita tisati tashandisa tadalafil powder. Zvinoenderana nechaunga ichi, zvinofungidzirwa kuti tora tadalafil upfu usati waita bonde, unoda kusiya nguva yakakwana yekutamba mhedzisiro, maawa 1-2.
Sezvo zvakajairika, Kujairira dosing yeCialis (tadalafil):
Ial Cialis (tadalafil) inowanzo kutorwa seye 10 mg dhizeti ingangoita maminetsi makumi matatu usati waita bonde kana zvichidikanwa. Iyo dosi inogona kugadziriswa chero kupi kubva pa30 mg kusvika 5 mg zvichienderana nemhinduro Cialis (tadalafil) haifanire kutorwa kanopfuura kamwe pazuva pazuva pane chero dosi.
♣ Kune vanhu vanotora Cialis (tadalafil) mazuva ese, iyo yakajairwa muyero ndeye 2.5 mg kusvika 5 mg nemuromo kamwe pazuva. Izvi hazvifanirwe kuve nenguva yakatarwa zvichibva pabonde.
Nezve rumwe ruzivo nezve tadalafil dosi kurudziro:
① Chiyero che erectile dysfunction
Iwe kazhinji unotora tadalafil usati waita bonde. Tora piritsi rimwe chete maminetsi makumi matatu usati waita bonde. Usatore inopfuura 1 piritsi pazuva. Iyo yakajairwa dosi ndeye 30mg. Chiremba wako anogona kuwedzera kana kudzikisa dhizaini yako, zvinoenderana nekuti inoshanda sei uye kuti unoitora kangani. Mhedzisiro yacho inogona kugara kwenguva yakareba kupfuura maawa makumi maviri nemana, saka haukurudzirwe kutora mapiritsi e1mg kana 10mg mazuva ese.
Kuti piritsi racho rishande nemazvo, iwe unofanirwa kuve unonakidzwa pabonde. Kana iwe uine yakavanzika mushonga we tadalafil, verenga iro ruzivo runouya nemushonga wako zvakanyatsonaka. Simba uye nemiyero mirairo inogona kusiyana.
② Dosage Yekuwedzera kweBenign Prostate
Tadalafil mahwendefa eakawedzera prostate anouya se2.5mg kana 5mg. Iyo yakajairwa dosi ndeye 5mg, inotorwa kamwe pazuva. Unogona kutora piritsi rako mangwanani kana manheru, asi zvakanak kuitora panguva imwe chete zuva rega rega.
Chiremba wako anogona kukupa yakaderera muyero we2.5mg kana iwe uine matambudziko, akadai semhedzisiro. Kana iwe uri kurapwa kune ese ari maviri benign prostatic kuwedzera uye erectile kudzvinyirira, iwo muyero uri 5mg.
③ Muyero wePulmonary Hypertension
Tadalafil mahwendefa epulmonary hypertension anouya mune 20mg simba. Iyo yakajairwa dosi ndeye 40mg - maviri 20mg mapiritsi, anotorwa kamwe pazuva. Aya mahwendefa akakura, saka tora mahwendefa rimwe mushure meimwe. Kana uine matambudziko eitsvo kana echiropa chiremba wako anogona kudzora dhizaini yekutanga kusvika 10mg kana 20mg.
Noted: Yese iripamusoro muyero ruzivo ndeye yekureva chete, ndokumbirawo kubvunza kwehunyanzvi zano kubva kuna chiremba.
8 Chokwadi Chaunofanira Kuziva Usati Watora Tadalafil powder
Adala Tadalafil haina kukodzera kune vamwe vanhu. Tadalafil inogona kutorwa chete nevanhu vakuru vane makore gumi nemasere zvichikwira.
Usati washandisa cialis powder, unofanirwa kuona mamiriro emuviri wako uye kuti zvakakunakira here kushandisa cialis poda, tarisa kuti wakakuvara here kana kuti kuremara kwepenisisi yako kare, wakarohwa kana kurwara nemoyo, uye ukave mamiriro eziso achikonzera kurasikirwa kwemaonero ... nezvimwewo.
❸ Kazhinji zvinotora maminetsi makumi matatu kusvika makumi matanhatu kuti tadalafil ishandire kusagadzikana kwe erectile. Unogona kuitora kamwe chete pazuva, kanokwana maminitsi makumi matatu usati waita bonde.
Kutora tadalafil pachayo hakuna kukwana kukonzera erection. Iwe unofanirwa kumutswa pabonde kuti ishande.
❺ Varume vazhinji havana mhedzisiro kubva kune tadalafil, nepo vamwe vane mhedzisiro mhedzisiro. Izvi zvinogona kusanganisira kutemwa nemusoro, kurwadziwa musana, kurwadza kwemhasuru, kurwadziwa mumaoko ako nemakumbo, kumeso kumeso, mhino dzakazara, uye kugaya.
❻ Inogara ichiuya semapiritsi aunomedza nemvura. Inogona kutorwa pamwe kana pasina chikafu.
Chenjerera kudyidzana nemimwe mishonga.Kana iwe wagadzirira kutora tadalafil powder, unofanirwa kurega kushandisa mimwe mishonga kwechinguva, dzivisa kukonzera rimwe dambudziko mumuviri wako. Kunyanya, usatore tadalafil kana iwe ukatorawo mishonga inonzi nitrate (inowanzo gadzirirwa kurwadziwa kwepfupa). Iko kusanganisa kunogona kukonzera zvine ngozi kudzikira kweropa.
Adala Tadalafil dzimwe nguva inonzi mazita ezita rekuti Cialis (ye erectile dysfunction uye benign prostatic enlmentment) kana Adcirca (yeplmonary hypertension).
Ndezvipi Zvakanakira Zvinounzwa naTadalafil? (Ongororo kubva kuMushandisi)
Cialis powder yainyanya kushanda kupfuura placebo mune zvese zvidzidzo mu erectile dysfunction. Kune rimwe remibvunzo, uko huwandu hwakawanda huri makumi matatu, varwere vakanyora akawanda angangoita gumi nemashanu vasati varapwa, vakanyora akawanda e30 kana 15 mushure mekugamuchira Cialis 22.6 mg kana 25 mg, zvichiteerana. Pakazara, mune zvidzidzo zvevazhinji vanhu, 10% yevarwere vakataura kuti Cialis 'pane zvaidiwa' yakagadzirisa zvavakaita zvichienzaniswa ne20% yeavo vanotora placebo. Varwere vanotora Cialis kamwe pazuva pazuva doses ye81 kana 35 mg zvakare vakashuma zvakagadziriswa erections zvichienzaniswa neavo vanotora placebo.
Cialis poda yakapihwa pachiyero che5 mg yaive zvakare inoshanda kupfuura placebo mune zvese zvidzidzo kune varwere vane benign prostatic hyperplasia, ine mhedzisiro inoratidza kuwedzera kukuru kwezviratidzo mushure memasvondo gumi nemaviri zvichienzaniswa ne placebo.
Heano vamwe vanhu vanobva kunyika dzakasiyana vakashandisa tadalafil powder, siya dzimwe ongororo:
Mr. Wang - Mushandisi anobva kuChina
Ini ndinotora Tadalafil yeBPH asiwo bhenefiti yeED. Wow, chakakura sei mushonga! Kwete chete iyo yakabatsira neBPH asi ini ndinogona kuwana yakaoma zvakanyanya uye izere girth erection nyore! Zvirinani simba, kusimba ejaculation pamwe nekuwedzera vhoriyamu yecum! Ndiri makumi manomwe nenomwe uye ndinoita senge ndine makumi matatu zvakare! .71 zuva rega rega rinoitira ini!
T Lee - Mushandisi anobva kuUSA
Yakatanhamara !!! Ndiri wemakore makumi mashanu nemashanu murume ane dambudziko rekuchengetedza erections kupfuura maminitsi gumi nemashanu. Kusvikira ndasangana neiyo tadalafil powder, ini ndinowana tadalafil pane alibaba uye ndotarisa ruzivo rwakawanda nezvazvo, ini ndinoronga kuzviedza pakupedzisira. Ndiri kutora 55mg yeCialis mazuva ese uye zvinoita kunge ndiri 15 zvakare. Dombo rakaoma erections pese pandinovada, nyore nyore kugara kwenguva yakakwana kuti igutse mudiwa wangu kakawanda uye pasina mhedzisiro. Uye ini ndinopika ini ndatoita 5-18 yakareba Asi izvo zvakagadziriswa zvakafanana nesimbi. Hazvidaviriki! Uye kakawanda pazuva kana wamutswa. Btw, Unogona kuwana vazhinji vanotengesa negoogle, ingoshandisa "tadalafil powder alibaba" paGoogle kutsvaga.
Manjeet Kaur-- Mushandisi anobva kuIndia
Kutora muyero wezuva nezuva we2.5g - wakakura uye 'unonakidza' mhedzisiro mushure memazuva maviri. Erection ikozvino yakanyanya kuoma kwenguva yakareba - zvakare chirume ikozvino chakanyanya kuwanda zvakanyanya kuti mudzimai wangu afare. Kana iri flaccid yenyika mbichana inoitawo kunge yakawanda 'yakaturikwa'. Tarisira kuve wakaomarara panguva yehusiku paunenge wakarara (kucherechedzwa kwemukadzi wangu) uye kuti umuke wakamira. Yakakurudzirwa! Kutaura chokwadi, ndine zvakawanda zvakaitika pakutenga tadalafil powder uye ndinongoda kuigovana neshamwari dzakawanda. Ini ndaraira imwe tadalafil poda muIndia asi inoshanda haina kunaka, shamwari yangu yakandiudza sosi yakanaka kubva kuChina, yakati yavo tadalafil powder inoshanda kwazvo. Ini ndinomubvunza kuti angazviwana sei zvisati zvaitika uye akapindura, shandisa tadalafil powder alibaba kana China kutsvaga paGoogle, ndinozviita sezvaakataura, asi zvakare shandisa tadalafil powder india kuti utsvage, tsvaga vamwe vatengesi. Ini ndakaraira imwe tadalafil powder kubva kune vakasiyana vatengesi, zvichienzaniswa nehunhu hwavo uye mutengo. Pakupedzisira, ini ndoda apicdmo, ivo vakanaka kambani uye ini ndichaishandisa nguva dzese.
Tadalafil Inokonzera Dambudziko (Mhedzisiro) paMuviri Uye Maitiro Ekurapa Izvo?
Kunge mishonga yese, tadalafil inogona kukonzera mhedzisiro mune vamwe vanhu. Vanhu vazhinji havana mhedzisiro kana zvishoma zvidiki.
Iyo inowanzoitika mhedzisiro mhedzisiro inogona kuitika ne tadalafil inosanganisira:
Kana izvi zvinyoro zvinyoro, zvinogona kuenda mukati memazuva mashoma kana mavhiki mashoma. Kana vakanyanya kuomarara kana vasingaendi, taura nachiremba wako kana wemishonga. Mukuwedzera, danaidza chiremba wako pakarepo kana iwe uine zvakakomba migumisiro:
- Priapism (mune varume): inorwadza erection iyo isingazopere.
- Chiono chinoshanduka: kuona mumvuri webhuruu kana uchitarisa kuzvinhu; kunetseka kuudza musiyano uripo pakati pemavara ebhuruu uye girini; kudonha kamwe kamwe kana kurasikirwa kwemaonero mune rimwe kana ese maziso.
- Kunzwa kurasikirwa: kurasikirwa kamwe kamwe kana kuderera kwekunzwa; kurira munzeve; dzungu.
- Kuderera kweropa: kunzwa musoro usina musoro kana dzungu; kupera simba; angina (kurwadziwa kwepfupa).
Tafura iri pazasi ine zvimwe zvakajairika zvine hukama ne tadalafil, izvo zvatinofanira kuita kana tiine mhedzisiro ye tadalafil:
Kazhinji tadalafil side-mhedzisiro (izvi zvinokanganisa isingasviki 1 muvanhu gumi) Ndingaitei kana ndikaona izvi?
Kutemwa nemusoro, mhasuru kurwadza uye kurwadziwa Kumbira wemishonga wako kuti akurudzire painkiller yakakodzera. Kana maaches achienderera, rega chiremba wako azive
Kuzvimbirira, kupuruzira, kunzwa kurwara (kuda kurutsa), yakavharwa mhino Izvi zvinofanirwa kupfuura nekukurumidza
Kunzwa dzungu, matambudziko nemaonero Usatyaire uye usashandise maturusi kana michina kudzamara maitiro ako / chiono chadzokera pane zvakajairwa
Nzira Yekutora Yechokwadi Tadalafil Powder?
Tadalafil imishonga inozivikanwa kwazvo mumusika sezvatinoziva tese. Vanhu vanonyanya kuwana Tadalafil muchimiro chemushonga kana piritsi rinotengeswa pasi pezita rekuti Cialis. Tadalafil inogona kunge iri mune yayo generic fomu asi haigone kuve yakasimba senge yekutanga fomu. Kune vazhinji vanogovana Tadalafil powder, asi iwe uchagara uchiedza kutsvaga kambani inogadzira mhando masevhisi uye zvigadzirwa. Zvikasadaro, iwe unozokweshana pamapfudzi nemutemo pakutengesa kana kushandisa zvigadzirwa zvekunyepedzera. Aya anotevera mamwe matipi anotungamira ekutsvaga yakanakisa Tadalafil poda yekugadzira:
❶ Mutengo wehupfu
Paunenge uchimhanyisa bhizinesi, akaunzi yemari imwe yaunoshandisa. Edza kutsvaga nezve iwo anoparadzira mitengo ye tadalafil uye itai kuti ive yako yekutanga kufunga. Nguva dzose tsvaga mugove anotengesa zvigadzirwa zvake nemutengo unonzwisisika. Ukasafunga nezve ichi chinhu zvakakomba, unogona kupedzisira waita kurasikirwa kukuru, uye pakupedzisira, bhizinesi rako richavharwa. Anogovana anofanirwa kukoshesa kuvimbika uye huwandu hwehuwandu, sezvo izvi zvichizobatsira bhizinesi rako kukura.
❷ Hunhu hwehupfu
Hunhu hwehupfu huchaenderana nemukurumbira wekambani kune rezinesi remugovera. Gara uine chokwadi chekuti muparidzi ane rezinesi uye akavimbika. Mugoveri akavimbika achaona zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. Iyo tadalafil poda iri kuzopedzwa nevamwe vanhu vanhu. Ita shuwa kuti uwane hupfu hwakakodzera kudyiwa nevanhu. Iko kushandiswa kweakaderera mhando, yekunyepera, uye yakapera hupfu kunogona kutungamira kune vatengi 'zviri pamutemo kunetsekana. Nekuda kweizvi, ita shuwa kuti iwe unoyedza vako vanogovera nokungwarira usati waita navo bhizinesi.
Delivery Yakakodzera nguva uye yakavimbika hurukuro
Paunenge uri mune chero bhizinesi, panogara paine dzimwe nguva hiccups. Kubudikidza nekuvimbika uye nenguva yekuendesa, zvinoreva kuti idzi hiccups dzese dzakadzikiswa nekukurumidza uye nekuvimbika, saka hadzikanganise kuendesa kwako kwehupfu. Kuti aite izvi, iye mugadziri anofanirwa kufunga nezvekuzara kwehupfu, achishandisa yakavimbika logistics kambani, kugara uchikurukura pane mamiriro ehurongwa, kukurumidza kutendeuka kwezvinhu zvisipo uye zvakakanganisika. Kana paine mamwe matambudziko akasangana, mugadziri anofanira kuenda mamaira ekuwedzera kuti agadzirise pasina mari yekuwedzera kana zvinokukanganisa iwe kana vatengi vako.
Services Makambani ekuchengetedza vatengi
Mugadziri akanaka anofanirwa kuratidza kunetsekana nezve bhizinesi rako uye ave wekubatsira mukukudza bhizinesi rako. Ivo vanofanirwa kubatsira kuteedzera izvo zvinhu, hesheni manejimendi, inotsigira kugona kuvandudza, uye kwete chete kumira panzvimbo yekutengesa. Tarisa pane yavo yekupindura mwero kuburikidza nekufona kana maemail. Mugadziri akanaka anofanirwa kugara aripo mukushandira kugutsikana kwevatengi. Iwe unoda akawanda masevhisi ekutsigira senge hesitori manejimendi, zvigadzirwa, uye mari. Aya masevhisi akakosha mukugadzirisa akakosha parameter anokanganisa bhizinesi rako, sekuwedzera kwemitengo uye zvigadzirwa zvigadzirwa.
Tsvaga inogadzira poda iwe yaunogona kuvimba nayo
Izvo hazvigoneke kuverenga uye kugara pasina kuvimba. Ndokusaka iwe uchifanira kuvimba nemugadziri wako nguva dzese. Vimba kuti zvavari kuita uye kukupa iwe ipfu yakanakisa. Kuvimba kunotora nguva kumisikidza. Iwo matipi mashanu ataurwa pamusoro anoumba hwaro hwakanaka kana iwe uchitsvaga akanakisa Tadalafil poda yekugadzira.
CMOAPI inyanzvi inogadzira huremu hwekudzora hupfu uye hupfu hwebonde, isu tinogadzira tadalafil poda mune temu uye kupihwa kwacho kwakagadzikana, kutsigira kuraira kwakawanda. Zvese zvigadzirwa zvinotsigira mutengo wekukwikwidza, uye chigadzirwa chedu chiri chemhando yepamusoro uye chinoenda kuomarara, kuyedza yakazvimiririra kuona kuti yakachengeteka kudyiwa pasirese.
Chatinoda kuvaka hukama hwakareba nevatengi vedu nekuti isu tinotarisana nebasa revatengi uye nekupa zvigadzirwa zvikuru. Kana iwe uchifarira chigadzirwa chedu, isu tinoshanduka-shanduka neyakagadziriswa mirairo kuti ienderane neyako chaiyo yaunoda uye yedu inokurumidza kutungamira nguva pane mirairo inovimbisa iwe uchave nekuravira kukuru kwedu chigadzirwa pa-nguva. Isu tinotarisawo pane kukosha-kwakawedzerwa masevhisi. Isu tinowanikwa yemibvunzo yebasa uye ruzivo rwekutsigira bhizinesi rako.
Mimwe Mibvunzo neMhinduro paTadalafil (Cialis powder)
(1) Inokurumidza sei Cialis powder kushanda?
Cialis powder (tadalafil) inokwenya mukati maminetsi makumi matatu mushure mekutora, kunyangwe zvingangotora nguva yakareba kune vamwe vanhu. Paavhareji, zvinogona kutora kusvika maawa maviri kuti zviite zvizere. Izvo zvakakoshawo kuti uzive kuti kuti uone mhedzisiro yehwendefa yeED, unofanirwa kumutswa pabonde.
(2) Tadalafil Recipe: Ungasanganisa sei yako poda tadalafil (Cialis) mune yemvura fomu
Unogona kutarisa rumwe ruzivo nezve gwara rekugadzira mvura tadalafil neiyi link: https://thunders.place/male-supplements/guide-how-to-mix-your-powder-tadalafil-cialis-into-a-liquid-form .html Wobva wazviita nhanho nhanho.
(3) Inoita nguva yakareba sei tadalafil?
Cialis powder (tadalafil) inogona kushanda kusvika maawa makumi matatu nematanhatu. Inogona kubatsira kuchengetedza yako erection kunyangwe mushure mekubuda ejaculation. Kana erection ikagara kwenguva yakareba kupfuura maawa mana, tsvaga kurapwa nekukurumidza kurapwa nekuti izvi zvinogona kutungamira mukukuvara zvachose.
(4) Tadalafil yakanaka seCialis here?
Cialis uye tadalafil zvine chinhu chimwe chete chinoshanda. Ivo vaviri anoshandiswa kurapa kusagadzikana kwe erectile; mutsauko chete ndeye tadalafil ndiyo generic vhezheni.
(5) Tadalafil yakasimba here kupfuura Viagra?
Tadalafil uye Viagra ese anoshanda kurapa erectile kudzvinyirira, uye musiyano mukuru pakati pezviviri ndeyekuti tadalafil inogara kwenguva yakareba sei pakuenzanisa netadalafil. Tadalafil inogona kugara kusvika maawa makumi matatu nematanhatu mumuviri, nepo Viagra inogona kusvika maawa mashanu.
 Sriram D. Mishonga Chemistry. Pearson Dzidzo India, 2010. p. 635.
 Wang Y, Bao Y, Liu J, Duan L, Cui Y (Ndira 2018). "Tadalafil 5 mg Kamwe Zuva Nezuva Kunovandudza Kwezasi Urinary Tract Zviratidzo uye Erectile Dysfunction: Kuongorora Kwakarongeka uye Meta-ongororo". Yakaderera Urin Turakiti Zviratidzo. 10 (1): 84–92. doi: 10.1111 / luts.12144. PMID 29341503. S2CID 23929021.
 United Hutano Kuchengeta (Nyamavhuvhu 16, 2016). "Kuvhara Chidimbu - Kushaya Simba Kurapa" (PDF). Kubatana kwehutano Hwehutano. Yakadzorerwa 20 Zvita 2016.
 "Tadalafil". Chemishonga Kubatsira Chirongwa. Yakadzorerwa 2020-08-19.
 Richards, Rhonda (Gunyana 17, 1991). "ICOS Pane Crest Pane Roller Coaster". USA Nhasi. p. 3B.
 "Tadalafil - Mashandisiro Ekushandisa Zvinodhaka". ClinCalc. Yakadzorerwa 11 Kubvumbi 2020.
 Kaye K. Gaines. "Tadalafil (Cialis) uye Vardenafil (Levitra) Munguva pfupi yapfuura Zvinotenderwa Zvinodhaka zveErectile Dysfunction". Medscape.
 "Cialis tadalafil PI". Kurapa Kwezvinhu Zvekufambisa. Yakadzorerwa 2020-08-19.
 Borthwick AD (Chivabvu 2012). "2,5-Diketopiperazines: Synthesis, Reaction, Medicinal Chemistry, uye Bioactive Natural Zvigadzirwa". Chemical Kuongorora. 112 (7): 3641-3716. doi: 10.1021 / cr200398y. PMID 22575049.